I-Google Forms: Umsunguli wefomu eliku-inthanethi | i-Google Workspace
Ngena ngemvume Iya ku-Forms Zami-forms for work
I-imeyili Yangokwezifiso Yebhizinisi
Inkomfa yevidiyo neyezwi
I-suit ehlanganisiwe yama-app avikelekile, omdabu we-cloud wokuhlanganyela nawokukhiqiza anikwe amandla i-Google AI.
Thola imininingwane ngokushesha, nge-Google Forms
Sungula kalula uphinde wabelane ngamafomu aku-inthanethi, uphinde uhlaziye izimpendulo ngesikhathi sangempela.
Zami-forms for work Iya ku-Forms
Okokusetshenziswa yimi mathupha
Okomsebenzi noma ibhizinisi lami
Bona ukuthi ungenzani nge-Google Forms
Sungula ifomu eliku-inthanethi kalula njengokusungula idokhumenti
Khetha kusukela kuzinhlobo eziningi zombuzo, hudula uphinde udedele ukuze uhlele kabusha imibuzo, uphinde wenze. ngendlela oyifisayo amanani kalula njengokunamathisela uhlu.
Thumela izinhlolovo ezipholishiwe namafomu
Enza ngendlela oyifisayo imibala, imifanekiso, namafonti ukuze ulungise ukubukeka nokuzwakala noma ubonise ukubhrendeka kwenhlangano yakho. .Futhi engeza okunengqondo kwangokwezifiso okubonisa imibuzo kusukela kuzimpendulo, ukuze uthole umuzwa ongenazihibe kakhulu.
Hlaziya izimpendulo ngezifinyezo ezizenzakalelayo
Bona amashadi ngesibuyekezo sedatha yokuphendula ngesikhathi sangempela. Noma vula idatha engahluziwe ne-Google Sheets yokuhlaziywa okujulile noma ukwenza okuzenzekelayo.
Sungula uphinde uphendule kuzinhlolovo kusukela noma ikuphi
.Finyelela, sungula, uphinde uhlele amafomu usendleleni, kusukela kuzikrini ezinkulu nezincane. Abanye bangaphendula kunhlolovo yakho kusukela noma ikuphi lapho bekhona—kusukela kunoma iyiphi idivayisi yeselula, ithebulethi, noma ikhompyutha.
Yakha amafomu uphinde uhlaziye imiphumea ndawonye
Engeza ababambiqhaza—njenge-Google Docs, i-Sheets, ne-Slides—ukuze wakhe imibuzo ndawonye ngesikhathi sangempela. Bese hlaziya imiphumela ndawonye ngaphandle kokwabelana izinhlobo eziningi zefayela.
Sebenza ngedatha yempendulo ehlanzekile
Sebenzisa ukuhlakanipha okwakhelwe ngaphakathi ukuze usethe izimiso zempendulo zokuqinisekisa. Isibonelo, qinisekisa ukuthi amakheli e-imeyili afomethwe ngokufanelekile noma ukuthi izinombolo ziwela ngaphakathi kwebanga elicacisiwe.
Yabelana ngamafomu nge-imeyili, ilinki, noma iwebhusayithi
Kulula ukwabelana ngamafomu nabantu abathile noma nezethameli ezibanzi ngokushumeka amafomu kuwebhusayithi yakho noma ekwabelaneni ngamalinki kwezokuxhumana komphakathi.
Ukuphepha, ukuthobela, nobumfihlo
Sisebenzisa izindlela eziphuma phambili zomkhakha zokuvikela ukugcina idatha yakho iphephile, okufaka ukuvikelwa kohlelo olungayilungele ikhompyutha. I-Forms iphinda idabuke kumafu, okususa isidingo samafayela asendaweni kuphinde kunciphise ingcuphe kumadivayisi akho.
Ukubethela endleleni nasekuphumuleni
Wonke amafayela alayishwe ku-Google Drive noma asungulwe ku-Forms abethelwe endleleni kanye nasekuphumuleni.
Ukuthobela ukuze usekele izimfuneko zokulawula
Imikhiqizo yethu, efaka i-Forms, ngokuvamile idlula ekuqinisekisweni okuzimele kokuvikela kwayo, ubumfihlo kanye nezilawuli zokuthobelana.
I-Forms ithobela ukuzinikela okufanayo okuqinile nokuvikelwa kwedatha njengawo wonke amasevisi ebhizinisi le-Google Cloud.
Ulawula idatha yakho.
Asilokothi sisebenzise okuqukethwe kwakho kwe-Forms ngezinjongo zesikhangiso.
Asilokothi sithengise ulwazi lwakho siqu kwizinkampani ezingahlangene ngqo.
Thola uhlelo olukulungele
I-Google Forms iyingxenye ye-Google Workspace
Lonke uhlelo lufaka
Zami-forms for work
Okomuntu siqu (Mahhala)
Bona amacebo angaphezulu
Amadokhumenti, Ama-Sheets, ama-Slides, ama-Forms
Isitoreji se-cloud esiphephile
Okungu-15 GB kumsebenzisi ngamunye
Okungu-2 TB kumsebenzisi ngamunye
Amadrayivu abiwe ethimba lakho
I-imeyili yangokwezifiso yekhasimende
Ukurekhodwa komhlangano kulondolozwe kuDrayivu
Ukulawula okubekwe phakathi nendawo
Izilawuli zenqubomgomo zokuvikela ezisuselwa kuqembu
Amaforamu aku-inthanethi okuzisiza wena nomphakathi
Usekelo oluku-inthanethi olungu-24/7 namaforamu omphakathi
Thola isiqalo esiphambili ngezifanekiso
Khetha kusukela kuzinhlobo zezinhlolovo, uhlu lwemibuzo, neminye imifanekiso edizayinwe ongoti ukuqalisa izinto ngokushesha.
Vakashela Igalari Lesifanekiso se-Forms ukuze uthole okuningi.
Landela i-yethu Ibhulogi